Q के मैले मेरो बच्चालाई रोटाभाइरसको खोप दिनपर्छ ?
रोटाबाइरस खोप भारतीय खोप दिने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यसैले तपाईंको बच्चालाई यसको खोप दिनु सुरक्षित हुन्छ । खोपको लागि सिफारिस गरिएको उमेर २ महिना, ४ महिना र ६ महिना हो । यदि बच्चालाई रोटाभाइरसको खोपमा एलर्जीको प्रतिक्रिया, मिसाइएको छ वा एकदमै धेरै प्रतिरक्षा क्षमता वा इम्युनोडिफिसिएन्सीको कमी छ भने ती अवस्थाहरुमा यो प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ ।
Q पुरुषलाई चरमोत्कर्षको बेलामा के ले समस्या गर्न सक्छ ?
चरमोत्कर्ष यौन आनन्दको भावनाले जनाइने यौन तनावको मुक्ति हो । मानिसको चरमोत्कर्षको लम्बाई औसतमा १०-१५ सेकेन्डको बीचमा हुने अनुमान गरिन्छ जुन उनीहरूले ३० सेकेण्ड समयसम्म पुर्याउन सक्दछ । पुरुषहरुमा यो शुक्रकिटको स्खलनद्वारा जनाइन्छ । तथापि, स्खलनसँग सम्बन्धित समस्याहरुले चरमोत्कर्ष प्राप्त गर्ने मानिसहरुको क्षमतालाई प्रभावित गर्न सक्छ । यसमा निम्न कुराहरु समावेश भएका हुन्छन्: एनेजाकुलेसन, अपरिपक्व स्खलन, रेट्रोगेट स्खलन, ढिलो हुने स्खलन र इरेक्टाइल डाइफन्सन ।